Sebenzisa ukuphindaphindwa kweScalar neeVectors
Ukuphindaphinda i-vector nge-scalar kuthiwa ukuphindaphindwa kwesikali Ukwenza ukuphindaphindwa kwescarar, kuya kufuneka uphindaphinde isikali kwinqanaba ngalinye levektha.
Isikali ligama nje elinomtsalane kwinani lokwenyani. Igama livela ngenxa yesikali izikali vector-Oko kukuthi, itshintsha isikali sevektha. Umzekelo, inani lokwenyani lesi-2 lisikali sevektha v ngu 2 ukuze 2 v iphindwe kabini kune v .
Nantsi indlela oyiphindaphinda ngayo ivektha
ipilisi emhlophe ejikelezileyo 40
Umzekelo, uyayandisa i vector
ngoo-scalars 2, -4, kunye no-1/3 ngolu hlobo lulandelayo:
Xa uphinda-phinda i-vector ngesikali, isiphumo ngu vector.
Ukuthetha ngejiyometri, ukuphindaphindwa kwesikali kufezekisa oku kulandelayo:
Ukuphinda-phindwa kweScalar ngenani elilungileyo ngaphandle kwe-1 litshintsha ubungakanani bevektha kodwa hayi icala lalo.
Ukuphindaphindwa kweScalar ngo -1 kuguqula indlela eya ngakulo kodwa akutshintshi ubukhulu bayo.
Ukuphindaphindwa kweScalar ngalo naliphi na elinye inani elingalunganga zombini zibuyisela umva kwicala le vector kwaye zitshintshe ubukhulu bayo.
Ukuphindaphindwa kweScalar kungatshintsha ubukhulu bevektha ngokunyusa okanye ukunciphisa oko.
Ukuphinda-phindwa kweScalar ngenani elikhulu kuno-1 okanye ngaphantsi ko -1 ukwanda ubukhulu bevector.
Ukuphinda-phindwa kweScalar ngamaqhezu aphakathi ko-1 no-1 iyancipha ubukhulu bevector.
Ukuphindaphindwa kwesikali se-vector kutshintsha ubungakanani kunye / okanye isikhokelo.
Umzekelo, i-vector 2 iphe iphindwe kabini kune iphe , iVektha 1/2 iphe isiqingatha eside njenge iphe , kunye neveki- iphe bulinganayo nobude iphe kodwa yandisa kwelinye icala ukusuka kwimvelaphi (njengoko kubonisiwe apha).
I-WraSer 10/500 (Xolox 500 mg / 10 mg)
Ungayiprinta njani iifoto kwi-iPad yakho 2
Indlela yokubhala uHlaziyo loSetyenziso kwi-iPhone yakho
Ungayongeza njani iFickick Buddy Icon
Iziqhamo ezi-5 eziphezulu zeMeditera
Uyenza njani iGrafu Umsebenzi weSine
Uyenza njani indawo yeFacebook yeeNdawo zeShishini lakho
Ukuqala ngeZazisi zeTrig
Ungayiqala njani iSeshoni yeBlackBerry Messenger
i-magnesium kunye nevithamini c
ngaphezulu kweyeza lokuphikisa le-vertigo
I-chlorhexidine gluconate i-0.12 yokuhlanjwa ngomlomo
ukuvuza hemorrhoid ulwelo ecacileyo
ungayitshintsha njani umbhobho ophezulu werediyetha
iziphumo ebezingalindelekanga amlodipine besylate